It is me. Ko Niknayman.: ဒို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒါတွေဖြစ်နေပြီ.ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလည်း
ဒို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒါတွေဖြစ်နေပြီ.ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလည်း
ဒီလို..ဓါးပြ အစိုးရရဲ့လက်ထက်..သင့်၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်..လုံခြုံလိမ့်မည် မတင်ပါနဲ့ ။ စစ်တပ်၏အနိူင်ကျင့်မှုအောက်တွင်..သင်နှင့်သင့်မိသားစု၏အသက်သည်..ရေပွက်ပမာသာဖြစ်ပါသည်။
သင့် မျိုးဆက်များဤ သို့ အဖြစ်ဆိုးမှကင်းဝေးစေရန်တာဝန်သည်..သင့်အပေါ်၌ တည်မှီနေပါသည်.
တော်လှန်ကြပါ.စည်းရုံးကြပါ. ညီညွတ်ကြပါ. စစ်အာဏာရှင်ကို.ဖြုတ်ချကြပါ။
Posted by အာဇာနည် at 10:17 PM